Drogba oo Ciyaaraha ka Fariistay isagoona reebay SAWIR iyo FARIITAN XAMAASADA LEH…(Aqri) – Gool FM
Drogba oo Ciyaaraha ka Fariistay isagoona reebay SAWIR iyo FARIITAN XAMAASADA LEH…(Aqri)
Byare November 22, 2018
(London) 22 Nof 2018. Didier Drogba ayaa ug dambeyn ka dhawaajiyay inuu ka fariistay ciyaaraha kubbada cagta.
40-jirka ciyaaraha kubbada cagta ku soo dhex jiray 20-sano ayaa ku guuleystay 18-koob Lix dal oo kala duwan uu ka soo ciyaaray.
Halyeyga Chelsea ayaa soo dhigay baraha Bulshada Sawir isagoo 11-jir ah wuxuuna soo raaciyay fariitan qiirada leh:
“1989 waa goortii ama halkii ay gabi ahaan ka bilaabatay.
“Marka aan ka fikiro 20-ka sano ee waayaheyga ciyaareed, anigoo eegaya Sawirka igama dhigeyso inaan ku faraxo guulihii aan gaaray sida ciyaaryahan ahaan laakiin tan ugu muhiimsan waa sida uu Safarkaan dheer uu nin ahaan ii dhisay.
“Haddii uu qof kuu sheego in Riyooyinkaagu ay aad u wayn yihiin lana gaari Karin, waxaad ku tiraahdaa ‘Mahadsanid’ isla markaana si adag u shaqee oo caqli ku dheehan yahay si aad Run uga dhigto Riyooyinkaaga. Had iyo jeer aaminsanoow.
“Waxaan doonayaa inaan u mahad noqo dhammaan ciyaartoyda, Tababarayaasha, Kooxaha iyo Taageerayaasha aan la soo kulmay isla markaana Safarkaan ka dhigay mid aan leeyahay.
“Waxaan sidoo kale Mahadnaq balaaran iyo Jaceyl u jeedinayaa qoyskeyga, kooxdeyda gaar ahaaneed kuwaa oo iga caawiyay dhammaan waayaheyga inta lagu guda jiray waqtiga fiican iyo waqtiga xunba.
“Waxaan eegayaa boggeyga xiga ee nolsheyda waxaana rajeynayaa inuu ilaah ii garab galo sidii uu ii caawiyay waayaheyga ciyaareed oo kale.”.